Wararka - Faa'iidooyinka cabitaanka shaaha cagaaran
Shaaha cagaaran waa shaah la sameeyo halsanayn, kaas oo haya maaddooyinka dabiiciga ah ee caleenta cusub oo hodan ku ah nafaqooyinka. Shaaha cagaaran waxaa lagu sameeyaa uuminta, shiilidda iyo qalajinta caleemaha geedka shaaha. Waa mid ka mid ah cabbitaannada ugu caansan adduunka waxayna leedahay taariikh kumannaan sano ah. Aynu eegno waxtarka iyo waxyeellooyinka shaaha cagaaran.
Waxtarka shaaha cagaaran
In si joogto ah loo cabo shaaha cagaaran wuxuu u fiican yahay maskaxda aadanaha, wadnaha iyo maqaarka. Shaaha cagaaran wuxuu kaloo ka hortagi karaa gabowga maqaarka, wuxuu kordhiyaa qoyaanka maqaarka wuxuuna ka hortagi karaa sameynta laalaabkii.
1. Hagaajinta shaqada maskaxda
Shaaha cagaaran waxaa ku jira qaddar yar oo kafeyn ah, taas oo kicin karta habdhiska dhexe ee jirka, kor u qaadi karta hannaanka xiisaha ee kiliyaha maskaxda, waxayna yeelan kartaa saamaynta nasashada iyo nasashada.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in qaadashada kafeega ee joogtada ahi ay yareyn karto halista cudurrada garashada sida cudurka Parkinson. Waxa kale oo ay leedahay saamayn gaar ah oo ku saabsan yaraynta dhanjafka.
Waxa ku jira kafeyn ee ku jira shaaha cagaaran aad buu uga hooseeyaa qaxwada, sidaa darteed ma aha mid kicinaya sida kafeega oo kale. Dadka qaar ayaa dhaha: Ka dib marka aan qaxwada cabbo, waxaan dareemayaa in aan noqday mishiin, marka waxaan ka qaxweeyaa shaqada; ka dib markaan cabbo shaah, waxaan dareemayaa inaan ku jiro janno, marka waxaan cabbaa shaah inta aan sheekaysanayo.
Sidoo kale shaaha cagaaran waxaa ku jira asiidh amino, kaas oo ka caawiya dhimista buuqa iyo hagaajinta niyadda. Daraasaduhu waxay muujiyeen in kafeyn iyo asiidhkan amino -ka ah ay kor u qaadi karaan xusuusta iyo feejignaanta dadka, yarayn karaan walaaca, iyo hagaajin karaan shaqada maskaxda.
2. Qalbigaagu ha ahaado mid caafimaad qaba
Cabbitaanka shaaha cagaaran si joogto ah waxay gacan ka geysaneysaa in la xakameeyo cudurrada wadnaha iyo joogtaynta wadnaha caafimaadka qaba. Dhiirrigelintu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee sababa cudurka wadnaha. Daraasaduhu waxay muujiyeen in isticmaalka joogtada ah ee shaaha cagaaran uu si weyn hoos ugu dhigi karo cadaadiska dhiigga ee systolic iyo diastolic.
Daraasad la sameeyay 2006 ayaa muujisay in dadka caba lix koob ama ka badan oo shaah cagaaran ah maalintii ay 33% u nugul yihiin inay yeeshaan sonkorowga nooca 2 marka loo eego kuwa cabba wax ka yar hal koob toddobaadkii.
Daraasad cilmiyeed la daabacay 2020 ayaa raacay laba kooxood oo dad ah oo aan lahayn taariikh wadne xanuun. Kooxda koowaad waxay cabeen shaah cagaaran in ka badan saddex jeer toddobaadkii, kooxda labaadna caado uma lahayn cabitaanka shaaha cagaaran. Qiyaastii 7 sano ka dib bilawgii daraasadda, saynisyahannadu waxay ogaadeen in celceliska da’da 50 jirka, dadka sida joogtada ah u cabba shaaha uu ku dhaco cudurka halbowlaha wadnaha 1.4 sano ka dib dadka aan shaah cabbin.
3. Kolestaroolka hoose
Catechin waa qaybta ugu weyn ee shaaha cagaaran. Catechin waa antioxidant dabiici ah oo leh anti-oxidant, anti-bararka iyo saamaynta anti-hypertensive. Waxay hoos u dhigtaa heerarka kolestaroolka iyadoo hoos u dhigaysa nuugista kolestaroolka jirka.
Falanqaynta 14 daraasadood oo la sameeyay 2011 ayaa muujisay in cabbitaanka celcelis ahaan laba koob oo shaah cagaaran ah muddo 10 sano ah ay si weyn hoos ugu dhigi karto heerka kolestaroolka lipoprotein ee cufnaanta hooseeya. Kolestaroolka lipoprotein ee cufnaanta hooseeya ayaa sidoo kale loo yaqaan "kolestarool xun" maxaa yeelay waxay keentaa in dufanka dhiigga ku uruuraan halbowlayaasha, taas oo kordhisa halista cudurka wadnaha ama istaroogga.
4. Daryeelka Quruxda iyo Maqaarka
Waxyaabaha ku jira shaaha cagaaran ayaa waliba leh saamaynta quruxda iyo daryeelka maqaarka. Polyphenols-ka shaaha ayaa ah walxo biyo-milmi kara. Ku dhaqidda wejigaaga waxay nadiifin kartaa wejiga dufanka leh, waxay ciriiri kartaa daloolada, waxayna yeelan kartaa shaqooyin jeermi -dilid iyo jeermis -dilis. Catechins -ka shaaha cagaaran waxay leeyihiin shaqo antioxidant xoog leh. Ka dib marka la mariyo alaabta daryeelka maqaarka oo ay ku jiraan maaddooyinka shaaha cagaaran maqaarka, waxay yareyn kartaa dhaawaca maqaarka ee ay keento shucaaca ultraviolet ee qorraxda.
Shaah cagaaran ayaa sidoo kale la muujiyey inuu leeyahay astaamo ka hortagga gabowga. Cilmi -baadhayaashu waxay ogaadeen in isticmaalka joogtada ah ee shaaha cagaaran uu hagaajin karo dabacsanaanta maqaarka.
5. Ilaalinta shucaaca
Dadka casriga ah ee inta badan hor fadhiya kombiyuutarada, habka ugu fudud ee looga hortagi karo shucaaca kombiyuutarka waa in ay cabbaan 2 illaa 3 koob oo shaah cagaaran ah oo ay cunaan oranji maalin kasta. Sababtoo ah shaaha ayaa hodan ku ah provitamin A, si dhakhso ah ayaa loogu beddeli karaa fitamiin A ka dib markii uu jidhku nuugo. Faytamiin A wuxuu isku dari karaa rhodopsin, taasoo ka dhigaysa indhuhu inay si cad wax ugu arkaan iftiinka mugdiga ah. Sidaa darteed, shaaha cagaaran kaliya ma baabi'in karo shucaaca kombiyuutarka, laakiin wuxuu kaloo ilaalin karaa oo hagaajin karaa aragga.
Waxyeellooyinka shaaha cagaaran
1. Aashitada tannic ee ku jirta shaah waxay caqabad ku noqon kartaa nuugista birta ee jidhka bini'aadamka. Shaaha aan qallafsanayn sida shaaha cagaaran wuxuu caqabad ku noqon karaa nuugista birta ee jirka aadanaha. Shaaha madow ee qallalan waxaa ku jira boqolkiiba shan tannin, halka shaaha cagaaran ee aan khamiirka lahayn uu yahay boqolkiiba toban. Markaa haddii aad cabto shaah cagaaran oo aad u badan, waxay keenaysaa dhiig -yaraan.
2. Cabitaanka shaaha cagaaran oo aad u badan ayaa si fudud u sababi kara calool istaag. Maaddooyinka shaaha ku jira waxay isku dari doonaan borotiinka cuntada ku jira si ay u sameeyaan walax cusub oo aan dheefshiidka lahayn, taasoo keenta calool istaag.
Waqtiga dhejinta: Apr-11-2021